Wasiirka amniga Puntland oo maanta ka hadlay ammaanka magaalada Bosaso iyo falalkii argigixisadu ka geysteen. | puntlandi.com
Wasiirka amniga dowladda Puntland, Axmed Cabdullaahi Yuusuf (Dowlad ), ayaa maanta sheegay inay dowladda Puntland gacan bir ah ku qabanayso xaalada ammaan ee magaalada Bosaso, halkaas oo dhawaan ay ka dhaceen falal argigixisadu ka dambeysay.
Wasiirka amniga ayaa hadalkaan ku sheegay shir jaraa’id oo uu maanta ku qabtay magaalada Bosaso, isagoo ka hadlayay arrimaha ammaanka gobolka Bari iyo gurmadka doonidi gaancsi ee kusoo caariday xeebta magaalada Bosaso, taasoo maanta lagu guulaystay in la gaaro.
Wasiir dowlad ayaa sheegay falalkii dhawaan ka dhacay magaalada Bosaso inuusan waxba ugeysandoonin ammaanka guud ee Puntland iyo dagaalka lagula jiro kooxaha argigixisada, Waxaa kale oo uu sheegay inay dowladdu si gaar ah uga shaqayndoonto xasilinta Bosaso.
Dowlad, ayaa dhinaca kale sheegay inuu meel wanaagsan u marayo xal ka gaarida khilaaf soo kala dhex galay guddiga amniga gobolka Bari, kuwaas oo dhawaan qeyb kamid ah ay soo saareen wareegto shaqada looga joojinayo taliyaha ciidanka booliiska gobolka Bari.
Wasiirka amnigu waxaa uu shacabka ugu baaqay inay hay’addaha amniga la shaqeeyaan si looga hortago falalka nabad galyada darrada ah ee ay maleegayaan kooxaha argigixisada.